Sebastian Salgado wathola ubuciko izithombe cishe ngengozi. Ngaphambili he wamabhuku Economist. Manje njengelinye lamazwe bezithombe yimpumelelo kakhulu futhi owaziwayo iplanethi ewumhlaba. Kanjani ngekusasa lakhe ngakho nzima? Njengoba ehamba empumelelweni yakhe? Konke lokhu ungafunda kulesi sihloko.
Sebastian Salgado wazalwa Februwari 8 , 1944, edolobheni elincane Aymorese, lapho kwakukhona abakhileyo abayizinkulungwane eziyishumi nesithupha kuphela. Ngaleyo minyaka, mayelana ayisikhombisa amaphesenti endaweni esifundeni kwakuhlezi ehlathini, manje ubhekwa "amaphaphu iplanethi". Khona-ke Brazilian ehlathini endaweni kwaba kabili ngobukhulu, bathi, France. Manje endaweni ihlathi amaphesenti eziyisikhombisa kuphela ngosayizi wasekuqaleni. Lapho Sebastian esemusha, idolobha lakubo ayengawunikela kuye kuphela esikoleni samabanga aphansi. Ngakho-ke, ukuze afunde okwengeziwe, wathatha waphoqeleka ukuba ashiye ke bese uya Vitoria, inhloko-dolobha ye-State of Espirito Santo. Elapho kuphothula esikoleni esiphakeme ngo-1962 futhi wabhalisa e-University. Ngemva kokuthola iziqu ngo-1967, washada Lelii Delyuyz Vanik.
Ngokushesha uSebastian Salgado wazala abafana ababili - Giuliano futhi Rodrigo. Nokho, elinde isivivinyo enkulu. Indodana encane kwaba nobulwelwe - Down syndrome. Lo mkhaya uthuthela Sao Paulo, lapho Sebastian ithole degree omunye zeMasters kwezomnotho, nomkakhe igcwaliswe imfundo yakhe zomculo. Yena iziqu Conservatory njengoba wopiyano.
Khona-ke, ngo-1969, base bethuthela e-Europe, futhi kuba Paris. Lapho, Sebastian abasebenze mqondo yakhe zobudokotela, futhi Lelia waqala ukufunda babe umklami. Ngo-1971, umndeni waphinda sokufaka. Sebastian ukuba ayosebenza njengenhlangano Economist for International Coffee Inhlangano. Uye amabanga amade, iqhaza ohambweni ehlukahlukene lixhaswe ngezimali yi-World Bank. Isikhathi esining impela wayengumuntu e-Afrika. Kwaba kukhona ukuthi wakha izithombe zakhe kuqala.
Ngolunye usuku, sengibuyile ezilethwa eLondon zivela Kolunye uhambo, Sebastian Salgado waqaphela ukuthi izithombe wabenza qinisa ke abaningi. Waze juqula juba emnothweni ukuze achithe ukuphila kwakhe izithombe. Ngakho-ke, yena nomkakhe babuyela eParis, kubhekwa edolobheni kuphela, efanelekayo lo msebenzi. Ekuqaleni, wasebenza njengoba ngezokuvakasha, kodwa kusukela ngo-1974, uSebastian ijoyina ejensi "Sigma". Lokhu kuthumela ke sesiya ePortugal, Angola nase- Mozambique, lapho photographer kancane kancane ayalolongwa art yakhe.
Khona-ke yashintsha umqashi wakhe. Le nhlangano entsha - "Gamma" - zamnika ithuba ukuhamba cishe kulo lonke elaseYurophu,-Afrika naseLatin America. Phakathi nalesi sikhathi umkakhe ukuthi baqede imfundo yakhe yazuza incwajana umsebenzi-urbanist. Ngo-1977, uSebastian waqala ukusebenza kuchungechunge olukhulu izithombe elalinikezelwe ukuphila zamaNdiya namakhaladi abalimi e-Latin America.
Ngo-1979, umthwebuli futhi washintsha indawo yakhe yomsebenzi. inkampani yakhe isiqashele "Magnum", asivulela iminyaka eyishumi nanhlanu zokuphila. Ngalesi sikhathi akusiyo kuphela idume yokubika wakhe ezivela emazweni ahlukahlukene kanye nezithombe, eyanyatheliswa ngo-womagazini odume kunayo yonke emhlabeni, kodwa futhi ekugcineni igcwaliswe amaqhawe akhe mayelana ukuphila kwabantu abavamile kuleli zwekazi South American. On osekelwe kuyo, wanyathelisa incwadi yokuqala ngo-1984. Lalibizwa ngokuthi "Okunye Melika" futhi zinyatheliswa kanyekanye e-United States, eFrance naseSpain.
Ngakho Sebastian Salgado, wenza izithombe zazo kuye komhlaba jikelele udumo, ithole indlela yakhe yangempela ekuphileni. Wazama usitshele nesimo sabantu abampofu futhi sibasize, okuhlanganisa neqiniso lokuthi iminyaka emibili wasebenza nenhlangano zezenhlalakahle "Odokotela without Borders", ukulungisa egameni esabekayo yabo izigcawu yendlala e-Afrika. Uye eshicilelwe izincwadi ezimbili ngaphansi kwegama "Sahel" - "Indoda yithemba 'futhi" Ukuphela Kwendlela ", futhi ihlelwe nemibukiso eminingi. Ngakho amsekela umsebenzi "Odokotela without Borders".
"Abasebenzi" futhi "Ukuthuthela"
Eminyakeni 1986-1992 Sebastian Salgado wavakashela amazwe amabili nantathu, ukwakha uchungechunge imisebenzi mayelana akhathazayo umsebenzi wezandla. Bona yashicilelwa "Kuyasebenza" incwadi ngo-1993. Lo msebenzi okuthengiswa emhlabeni ukuzungeza umhlaba amakhophi ayinkulungwane 100 nezithombe embukisweni kwaba iminyuziyamu engaphezu kwengu-60.
Njengoba phambili "master Workers iqala uchungechunge esilandelayo izithombe enesihloko esithi" Ukuthuthela ". Le projekthi wawumyisa emazweni 43. Wayeya ngebhasi lokunqamula amazwekazi ukukhombisa isiphetho abantu bephoqeleka ukuba ashiye emaphandleni ukuthuthela edolobheni. Ngokwesibonelo, kwathatha imizi esithoba kwezo ezinababaleki phezu emashumini eminyaka amuva nje kuye kwanda kakhulu. ethandwa kakhulu babe izithombe zakhe kusuka uchungechunge oluthi "Ekumeni izingane kwabantu." Ngesisekelo lezi izithombe benziwa amaphosta, wanyathelisa incwadi entsha, basungule izinhlelo ezikhethekile zemfundo kanye nemibukiso ukubona abantu abayizigidi ezintathu.
Kodwa Sebastian Salgado, ogama biography kwaba isihloko isifundo sethu amancane, ayikwazanga ngenzile konke lokhu ngaphandle kosizo umkakhe. It wayengadlali owayenguyise isici esiyinhloko okudala yonke ukukhuthazwa ubuciko umyeni wakhe. Ngakho-ke, ngo-1994, banquma ukwakha okwabo.
Mhlawumbe kule nkampani angabizwa ngokuthi umhlaba uye kulencane kakhulu. Kodwa-ke lapha ukuthi Sebastian Salgado nomkakhe bakwazi phaka amandla ngokugcwele emisebenzini yayo elalinikezelwe ukuvezwa izinhlangothi mnyama emphakathini wanamuhla, izinto ezinyantisa umzimba empini, ukuhlupheka abantu abampofu futhi elambile, kude le ukuphila okuchumayo emazweni acebile. Masters yayingase ibizwe ngokuthi u nombhali izithombe emphakathini. Maphakathi art yakhe - ebusweni ezihloniphekayo, nakuba ngokuvamile zonakaliswa ukuhlupheka. Zonke izinhlamvu yakhe abe ukuthula kwayo okujulile kwangaphakathi esigcizelela Ukwakheka abasebenzi abanekhono futhi ikhono ukudlala ukukhanya nasethunzini kuphela. Nakuba abanye abahlaziyi bammangalela aesthetization ubuhlungu, eqinisweni Sebastian uzama nje ukuziqhakambisa, izinkinga okungekho muntu ofuna ukubona, ukuze uthole ukuxazulula izinkinga ukuthi ingxenye yabo bonke abantu abasemhlabeni, eye kudala badela.
"Genesise" nezinye amaphrojekthi
Kusukela 2004 kuya 2011 wasebenza njengoba photographer kuchungechunge giant izithombe ngokuthi "Genesise". project "Genesise" uvame ukubizwa imvelo abakhuluma isiRashiya. Lokhu kungenxa yomsebenzi ezinkulu kakhulu wenza Sebastian Salgado. Izilwane nabantu, izilwane zasendle, futhi imiphakathi womuntu, ubutha nokuzwana, nokuzalwa nokufa - bonke abakhona kule ndaba ezinhle isithombe mayelana namasiko bendabuko kanye izizwana enqaba ukulandela indlela impucuko yesimanje futhi intuthuko kwezobuchwepheshe.
Futhi ngo-2007, umdwebi udale iphrojekthi "Coffee", okwabonisa ukuthi intengo ukudala isiphuzo ethandwa ku emasimini e Brazil, India, Guatemala, nakwamanye amazwe. Kanye nonkosikazi wakhe Sebastiano uzama ukubuyisela Atlantic Ihlathi elahlekile ezweni lakubo. He qamba elikhethekile elithi "Instituto Terra", okungakho wakwazi ukuguqula le ngxenye Brazil kuze kufike endaweni ebekelwe. Photographer lithole imiklomelo eminingi futhi ukubaluleka global waba Sokuthakazelelwa Ambassador ngoba UNICEF. Ngisho e ifilimu kushiya umzila Sebastian Salgado. "Usawoti Zomhlaba," ifilimu ngakho (ngo-2014), okuyinto yathathwa ngu Wim Wenders , futhi le ndodana yalo photographer Zhulianu Salgado, yawina umklomelo at Cannes.
Biography Mariana Ro: amaqiniso ezithakazelisayo, ukuphila siqu, izithombe
Ungagijimi GTA "San Andreas"! Kanjani ukulungisa iphutha?
Lacquered Lipstick "L'Oreal": ukubuyekezwa, Palette imibala, izithombe